Uluhlu oluphezulu lwe-4 ethengiswa kakhulu kumalaphu ngo-2021, ngaba lukhona uhlobo lwakho?
Ukuya kuthi ga ngoku sifunda ukuba zingaphezulu kwe-10,000 iintlobo zelaphu kwimarike. Amalaphu amane abonakala kwiimpawu zawo ezizodwa. Makhe sibone ukuba zithini. Kuqala, ilayiloni yenyani Kukho ilaphu le-spandex lenylon, ilaphu ye-nylon spandex yangaphantsi, ilaphu le-nylon spandex leggings. Kule minyaka idlulileyo, ”...
Yintoni ilaphu le-pique, kwaye kutheni ikhethwe kakuhle ihempe?
Okokuqala, uya kuthi ufumane amagama ahlukeneyo kunye neendidi zamalaphu onokuthi ungaqhelani nawo xa ujonga iintlobo ezahlukeneyo zamalaphu. Ilaphu le-pique yenye yezinto ezingathethi kangako ngamalaphu kwaye mhlawumbi into ongakhange uyive ngaphambili, ke silapha ukuphendula imibuzo ...
I-Tricot ivela kwisenzi sesiFrentshi tricoter, esithetha ukunitha. Indwangu yeTricot inesakhiwo esihlukileyo se-zigzag ngombala kwelinye icala kwaye igudile kwelinye icala. Oku kwenza ukuba ilaphu lithambe kwaye lomelele kakhulu kwimidlalo nakwimpahla esebenzayo. Ulwakhiwo lweTricot Ilaphu iTricot fabr ...
Yintoni ilaphu lomaleko womoya?
Izinto zomaleko womoya kwilaphu zibandakanya ipholiyesta, ipholiyesta spandex, ipholiyesta yomqhaphu spandex, njl Siyakholelwa ukuba amalaphu omaleko womoya aya ithandwa ngakumbi phakathi kwabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya. Njengamalaphu enziwe ngesandwich, iimveliso ezininzi ziyayisebenzisa. Ilaphu umaleko umoya luhlobo te ...
Khetha elona laphu lililo ngokwakho
I-Yoga luhlobo lokuzilolonga ngokuzilolonga olunamandla okuba bhetyebhetye. Igxininisa ubunye bendalo kunye nomntu, ke ngekhe ukhethe iimpahla zeyoga ngokungakhathali. Ukuba ukhetha iimpahla ezinamalaphu amabi, unokukrazula okanye ukhubazeke xa usenza umthambo wolule. Oku akupheleli nje ekulungiseleleni ...
Umahluko phakathi kwelaphu le-ATY kunye nelaphu lomqhaphu
Iimpawu zamalaphu e-ATY. Okwangoku, izinto zokwenza izinto ze-ATY amalaphu kwintengiso ikakhulu ziyinylon kunye ne-polyester. Phakathi kwazo, i-polyester inexabiso elicacileyo. Ngapha koko, emva kweminyaka emininzi kangaka yophuhliso, amalaphu efayibha yemichiza ayisekho impahla esezantsi kunye nezitali ...
Ukuthandwa kwamalaphu e-cationic
Yintoni ilaphu lecationic? Amalaphu e-cationic aqhutywa ngeendlela ezizodwa zomzimba zokwenza imisonto ye-cationic njenge-cationic polyester yarn okanye i-cationic nylon yarn. Ke kutheni kubalulekile ukuyenza ibe ngumsonto we-cationic? Ngenxa yokuba iimfuno zentengiso. Imisonto yeCationic kukumelana kobushushu obuphezulu, ke i-durin ...
Umahluko phakathi kwelaphu lejezi kunye nelaphu elingenayo
1, Umahluko wesakhiwo phakathi kwelaphu lejezi kunye nelaphu elingenayo ngaphakathi Ilaphu linombhalo ofanayo kumacala omabini, kwaye ilaphu lejezi linendawo engaphantsi eyahlukileyo. Ngokubanzi, ilaphu yejezi yahlukile kumacala omabini, kwaye ilaphu elingenayo liyafana kumacala omabini, ...
Leliphi ilaphu elisetyenziselwa ukudada?
Ukuthandwa kwamalaphu okudada bekusoloko kuqhubeka ixesha elide. Xa ukhetha amalaphu okudada, akufuneki ukhethe amalaphu amhle kuphela, kodwa ukhethe amalaphu asebenza kakuhle kunye nomgangatho ophezulu, kwaye unokukhululeka xa usetyenziswa. Xa sikhetha ilaphu elifanelekileyo lokuhlamba ...
Inxalenye yelaphu lentaka kunye nokusetyenziswa
Ilaphu lentaka elineintaka, sihlala silibiza ngokuba "lilaphu lobusi" - lilaphu elinithiweyo. Inokwenziwa nge-polyester okanye umqhaphu, kwaye umzi-mveliso uhlala wenza ilaphu leentaka le-polyester. 100% ipholiyesta ifayibha ephothiweyo kwaye zilungiswa yi bokudaya nokugqiba, ezininzi iimveliso zisetyenziselwa pro ...
Iindaba malunga nelaphu lemingxunya yamandla
1, Ngawaphi amalaphu anemingxunya yamandla Ngokubanzi ilaphu lemingxunya yamandla lenziwe nge-polyester / nylon nge-spandex, eyenza ukuba yolule kakuhle. Umnatha wamandla lilaphu elomeleleyo elilungele uxinzelelo lwempahla enje ngokunxiba okusebenzayo, ukunxiba ukudanisa, iimpahla zokudada, iimveliso zonyango, nokwenza i-bra kunye neempahla zangaphantsi njenge ...
Ukushicilelwa kweSlim-enye yezona mpapasho zidumileyo ehlabathini
1. Yintoni ukushicilelwa kwe-sublimation Ukushicilelwa kwe-sublimation isebenzisa iprinta ye-inki yejet exhotyiswe nge-thermal transfer inki ukuprinta imizobo, imihlaba, iitekisi, kunye neminye imifanekiso kwiphepha loshicilelo lokuhambisa ngokudlulisa ngendlela eguqukayo yesipili. Emva kokuba isixhobo sokuhambisa eshushu shushu shushu ...
Uluhlu oluphezulu lwee-4 ezithengisa kakhulu kwi-2021, ...
Ukuya kuthi ga ngoku sifunda ukuba zingaphezulu kwe-10,000 iintlobo zelaphu kwimarike. Amalaphu amane abonakala kwiimpawu zawo ezizodwa. Masibone ukuba yintoni ...